I-Aluminium Alloy uhlobo lokuphakamisa ipulatifomu enamandla aphezulu nekhwalithi ephezulu ye-Aluminium Alloy material, inezinzuzo zokubukeka okuhle, usayizi omncane, isisindo esincane, ibhalansi yokuphakamisa, iphephile futhi inokwethenjelwa, ipulatifomu yayo yomshuwalense egqoke intambo yocingo nedivayisi yokuvikela ukuphepha, futhi ingasebenza, esetshenziswa kabanzi emafektri, amahhotela, izindawo zokudlela, izikhumulo zezindiza, iziteshi, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, ihholo lombukiso nezinye izindawo, kungadlula jikelele nokuphakamisa, kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Ipulatifomu yenkampani esanda kuthuthukiswa yohlobo lwe-4 + 2 yohlobo lwe-aluminium alloy, ukuze ukuphakama okuphezulu kwamamitha angama-26.
Ukuhlukaniswa Ngokwezibalo zemasti, ingahlukaniswa nge:
1. Ipulatifomu ye-single-mast aluminium alloy lifting: Isekelwa yi-single-mast, ipulatifomu yomsebenzi ilifti yokuqala ye-aluminium alloy evelayo. Umshini wonke ulula ngesisindo, uguquguqukayo ukuhamba, ulungele ukusebenza komuntu oyedwa, futhi ungangena emnyango ojwayelekile ojwayelekile kanye nekheshi lesakhiwo ngemuva kokuqiniswa.
2. Ipulatifomu yokuphakamisa i-double-mast aluminium alloy: Umkhiqizo wesizukulwane esisha wemitha wenziwe ngamaphrofayli e-aluminium anamandla aphelele. Ngenxa yamandla wephrofayili ephezulu, ukuphambuka nokujikisa kwepulatifomu yokuphakamisa kuncane kakhulu. Yamukela ukwakheka kwe-double-mast, umthamo omkhulu wokulayisha, indawo enkulu yesikhulumi, ukuzinza okuhle kakhulu, ukusebenza okuvumelana nezimo nokusetshenziswa okulula. Ngokubonakala kwayo okukhanyayo, ingakwazi ukusebenzisa amandla okuphakamisa kakhulu endaweni encane kakhulu. Ilifti isetshenziswa kakhulu emafektri, emahhotela, ezakhiweni, enxanxatheleni yezitolo, eziteshini, ezikhumulweni zezindiza, ezinkundleni zemidlalo, njll. Ingasetshenziselwa imisebenzi ephezulu njengokufakwa nokugcinwa kwezintambo zikagesi, izinto zokukhanyisa, amapayipi aphezulu, neziphezulu- ukuhlanzwa kokuwa.
3. Ipulatifomu yokuphakamisa i-aluminium ingxubevange emithathu: Amaqembu amathathu ezinsika ezisekela amapulatifomu womsebenzi aphakanyisiwe futhi ehliswa ngokuvumelanayo. Isakhiwo esisekelayo nesibuyayo siyefana nesipulatifomu semasti eyodwa, esinamandla amakhulu okulayisha nokuzinza okuhle kakhulu kokusebenza. Idivayisi ebalulekile yokuphakamisa i-guardrail inamandla amahle, inciphisa kakhulu ukuphakama komshini wonke ngesikhathi sokuhamba, futhi ilula kakhulu ukulayishwa nokulayishwa. Umhlangano noma ukuqaqa kungagcwaliswa ngokunyusa okukodwa. I-lift inamandla okuphatha aqinile futhi ilungele abantu ababili (abangathwala isisindo esithile samathuluzi nezinto zokwakha) ngasikhathi sinye bekhuphuka imisebenzi; ingabuye yenziwe ngokwezifiso ngokuya ngezindawo ezahlukahlukene kwimikhiqizo eyahlukahlukene engajwayelekile ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene.
4. Ipulatifomu ye-Multi-mast aluminium alloy lifting: Yonke ihlanjululwa ngamaphrofayili we-aluminium anamandla amakhulu. Ngenxa yamandla wephrofayili ephezulu, isakhiwo semastikhi ezine sinokuqina okuhle kakhulu, ukusebenza okuguqukayo, umthamo omkhulu wokulayisha, indawo enkulu yepulatifomu, nokuqaliswa okulula. Ngokubonakala kwayo okukhanyayo, ingakwazi ukusebenzisa amandla okuphakamisa kakhulu endaweni encane kakhulu. Yenza ukuphambuka nokujikisa kwesikhulumi sokuphakamisa kube kuncane kakhulu. Ilifti isetshenziswa kakhulu emafektri, emahhotela, ezakhiweni, enxanxatheleni yezitolo, eziteshini, ezikhumulweni zezindiza, ezinkundleni zemidlalo, njll. Ingasetshenziselwa imisebenzi ephezulu njengokufakwa nokugcinwa kwezintambo zikagesi, izinto zokukhanyisa, amapayipi aphezulu, neziphezulu- ukuhlanzwa kokuwa.
Ngokuya ngokusebenza, ingahlukaniswa nge:
1. Ipulatifomu yeselula yokuphakamisa i-aluminium yeselula: umkhiqizo osanda kwaklanywa wesizukulwane esisha uthola amaphrofayili amasha e-aluminium alloy. Ngenxa yamandla amakhulu amaphrofayili, ukuphambuka nokujikisa kwepulatifomu yokuphakamisa kuncane kakhulu. Ngokubonakala kwayo okukhanyayo, ingakwazi ukusebenzisa amandla okuphakamisa kakhulu endaweni encane kakhulu. Yenza imisebenzi yomuntu ophakeme ephezulu ibe umoya futhi ingahanjiswa ukuze isebenze.
2. Ipulatifomu yokuphakamisa i-aluminium engaguquki: umkhiqizo wesizukulwane esisha osanda kwakhiwa uthola amaphrofayili amasha e-aluminium alloy. Ngenxa yamandla amakhulu amaphrofayili, ukuphambuka nokujikisa kwepulatifomu yokuphakamisa kuncane kakhulu. Ngokubonakala kwayo okukhanyayo, ingakwazi ukusebenzisa amandla okuphakamisa kakhulu endaweni encane kakhulu. Kwenza kube lula kumuntu oyedwa ukusebenza ezindaweni eziphakeme, futhi kungalungiselelwa kuphela umsebenzi ngaphandle kokuhamba.
3. Ithebula le-telescopic top aluminium alloy lifting platform: I-telescopic top top lift ihlanganiswe nokwenziwa ngokwezifiso okungamasondo amane noma okwenziwe ngemoto. Ipulatifomu inganwetshwa ngokukhululekile futhi inikezwe izinkontileka ngesikhathi sokusebenza okuphezulu, ngaleyo ndlela kwandise ububanzi bomsebenzi! Kungenziwa egcizelele ngokuya ngesimo sangempela sekhasimende.
4. Isiteji sokusonga esigoqayo: ilifti eligoqwayo lasendlini, elohlobo oluthile lwelift, ikakhulukazi ilifti eligoqwayo lasendlini. Ugongolo lakhiwa izingcwecwe ezimbili zensimbi, futhi zishiselwe futhi zixhunywe ngenqwaba yamakhadi wokuxhuma abumbeke njengo- “U”, akha igebe phakathi nendawo, futhi izingxenye zangaphambili nezangemuva zibekwe ngokulandelana kuthrekhi eyakhiwe igebe elenziwe yinqola exhunywe yimoto eya phambili nangemuva kanye nokuphakamisa ugesi. Ngakho-ke, ukunqotshwa kwesakhiwo esingenangqondo nokusetshenziswa okungahambi kahle kwamakheshi asekhaya akhona kuyanqotshwa. Imodeli yokusetshenziswa inezinzuzo zesakhiwo esizwakalayo, ukukhiqizwa okulula, izindleko eziphansi, ukusetshenziswa okulula, ukusebenza okuqinile, futhi kungasetshenziswa yimindeni eminingi enomshini owodwa noma esetshenziswa ngumndeni owodwa, njll.
Ukuphakama okukhulu kwesikhulumi (m)
Ukunikezela Amandla (V)
Langaphambilini Ukuzishayela okuzenzakalelayo Ukuphakamisa
Olandelayo: Izikele ezizihambisayo Phakamisa
Phakamisa i-Aerial Aluminium Alloy
Ingxubevange Mast Phakamisa Ipulatifomu